fitiavan-tanindrazana – Blaogin'i Voniary
Étiquette : fitiavan-tanindrazana
Fitiavana mandehandeha raha I Gaelle na Ramamonjisoa Tsanta Gaelle: fitiavana ny fianakaviany sy ny olona rehetra, fitiavana ny asa ataony ary fitiavana an’i Madagasikara. Ny fiainany manontolo no entiny ijoroana vavolombelona satria rehefa misy zavatra hitanao hoe tsara tokony halain-tahaka, hoy izy, dia fadiana ny mibaiko fotsiny fa tonga dia ianao mihitsy no mila manao... Lire la Suite →
Tao anatin’ny tarika Da Hopp, miangaly Rap gasy, no nahafantaran’ny besinimaro an’i Ben J na Dadlah BenJ. Mitondra ny anarany manokana ihany koa izy eo amin’io sehatra io. Ankehitriny, izy no filoha mpitarika ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA izay manentana amin’ny fiovan-toe-tsaina. Fantaro bebe kokoa ao anatin’ity antsafa ity ary i Ben J. Voniary : Nanao ahoana... Lire la Suite →